Gudoomiye Ku xigeenka 1-aad Golaha Shacabka oo baaq u diray Xukuumadda | Faafan News
Gudoomiye Ku xigeenka 1-aad Golaha Shacabka oo baaq u diray Xukuumadda
C/wali Sheekh Ibraahin Muudey Guddoomiye Ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka ayaa sheegay inaysan habooneyn in la xaqiro wax qabadkii ay sameyen Xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray oo ku soo shaqeeyay xalad adag.
Muudey oo fariintaan u diraayay Ra’iisal Wasaare Khayre iyo Golihiisa Wasiirada ayaa wuxuu sheegay inay dalka yimaadeen iyadoo wax kasta ay nidaamsan yihiin oo marxalad adag lagu soo shaqeeyay, kadibna talada dalka ay qabteen.
Gudoomiye Ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka ayaa sheegay qof kasta oo Soomaali ah oo wax u qabtaan dalka inuu mudan yahay ku ammaanida shaqada Qaranka, laakiin aanan la xaqijiri wixii uu soo qabtay.
“Saaxiibkey Khayre iyo Wasiiradiisa qaar ka mid ah ayaa waxaan ka dhageysanayay in iyagu uun wax qabteen, Waxaan goobjoog u ahaa 2009 Xildhibaan baahi ugu dhintay Magaaladan markii wax uu cuno waayay qof uu shaxaadana garan waayay.”!
“Maantana waad arkeysaan meeshaan quruxda badan ee aad xilka kula kala wareegaysaan, Dad ayaana keenay ee iska imaanin, Taabid iyo Yariisowna ma keenin ee waa laga horeeyay ee ilaahey halagu xamdiyo meel barwaaqo ah ayaad timaadeene.” Ayuu yiri Muudey xilli uu khudbad ka jeedinaayay Aqalka Dowladda Hoose.
Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa muddooyinkii dambe waxa ay astaan ka dhigatay hal ku dhiga ah waa markii ugu horeysay oo ka turjumaysa shaqada la qabtay inay tahay tii ugu horeysay ee nooceeda dalka laga sameeyo.